ယနေ့ ရွေ နှင့် ငွေကြေး ပေါက်ဈေးနှုန်းများ | Freedom News Group
ယနေ့ ရွေ နှင့် ငွေကြေး ပေါက်ဈေးနှုန်းများ
by FNG on January 5, 2011	ဘလင့် ဟက်ကာ အုပ်စု မှ ကြံဖွတ် ၀ဘ်ဆိုတ် အား နှစ်ရက်တိုင် ထိန်းချုပ် ထားပြီး နောက် http://www.khitlunge.net.mm နှင့် http://www.khitlunge.org ဆိုတ်နှစ်ခုလုံး ကိုပါတွေ့ ရစဉ် ။ပုံတွင် ခေတ်လူငယ် ၀ဘ်ဆိုတ်၏ ကုန်ဈေးနှုန်း နှင့် ငွေကြေးလဲလှယ် သည့် သတင်းများ ဉ် ဘလင့် ဟက်ကာ အုပ်စုမှ ပြောင်းလဲ ရေးထား သည် ကို တွေ့ ရစဉ် ပြန်လည်ထိန်းချုပ် နိုင်ခြင်းမပြုသေးသည့် ခောတ်လူငယ် အင်တာနက်စာမျက် နှာတွင် စစ်အာဏာရှင် သန်းရွှေ၏ အနာဂတ် ကံကြမ္မာ ကို ပုံဖော်ပြထားစဉ်။ဒီစာမျက် နှာ ကို ကလစ်ရင် HALO :LEGEND ဇာတ်ကားထဲက ဇာတ်ဝင်တေးကို လည်းနားဆင်ရမှာပါ လူမှု မီဒီယာ ကွန်ယက် တွင် သတင်း ကို ဖြန့် ဝေရန်Click to share on LinkedIn (Opens in new window)Share on Facebook (Opens in new window)Click to share on Pinterest (Opens in new window)Click to email (Opens in new window)Click to share on Twitter (Opens in new window)Click to print (Opens in new window)Click to share on Google+ (Opens in new window)Click to share on Tumblr (Opens in new window)Like this:Like Loading...	From: နည်းပညာ သတင်း, ပြည်တွင်းသတင်း	← ၆၃ နှစ်မြောက် မြန်မာ့ လွတ်လပ်ရေးနေ့ 
ပလက်ဝ မြို့ ခံတပ် နှင့် ရခိုင် တပ်ဖွဲ့များ စစ်ဖြစ်ပွား →
aung aung	#
I think his father is soldier.May be his family are working in army.
January 6, 2011	Nyein Moe	#
Hay kg joker, min lal , ho kg simple lo, chee sar pee kyi lar tar pal.
January 6, 2011	tiger	#
အေး…အဲဒီ ဒီမို ဆိုတဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည့် ရဲ့အဖေ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကြောင့်တိုင်းပြည်လွတ်လပ်ရေးရခဲ့ တာကွ ကိုယ် မေကိုလိုးရဲ့ ….မင်းအဖေနဲ့ အမေက လွတ်လပ်ရေးရခဲ့ လို့အေးအေးဆေးဆေး လိုးပြီး မင်းကို မွေးလာတာကွ…နောက်မို
ဆို မင်းအမေ့ ကို ကုလားတွေ လိုးပြီးလောက်ပြီ…ကြားလား joker ဆိုတဲ့မအေလိုး..ရဲ့ 
January 6, 2011	joker	#
simple နံမည်နဲ ၀င်ဝင်ရေးနေတာတစ်ယောက်ရှိနေတယ်.. သီးခြား ဖြစ်သွားအောင်ပါ.. ဒါပင်မဲ့အဲဒီလူက ဒီမိုတွေကို အဆင့်မရှိတဲ့ကောင်တွေအနေနဲ့ခံယူထားတာခြင်တော့တူတယ်.. ဒါကြောင့်သူကိုဘာမှမပြောတော့ဘူးကိုယ့်ဘာသာပဲပြောင်းပေးလိုက်တယ်။ မင်းတို့လောက်ကတော့ စရင်းထဲမရှိဘူး… ဘာလိုလဲဆိုတော့ ဒီမိုသမားတွေကလူတန်းစားတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့သူတောင်းစားသာသာတွေမိုလို့.. မင်းတို့ရဲ့ လူတန်းစားတိုက်ပွဲက နည်းနည်းပစ်ကြွေးလိုက်တာနဲ့ ပြီးသွားမှာ နိုင်ငံအတွက်ဘာခံယုချက် ဘာစိတ်ဓါတ်မှမရှိဘူး… အပေါ်စားတာ။
January 5, 2011	Red Star	#
ခင်ဗျား ကြီ: က စောက်ဆင့် ရှိရှာတာကိုး။။ :D
January 6, 2011	lay phyu	#
အဲဒီတော့ ဆင်ငပဲရော ဂျိုကားတဲ့နွားရော လီးပဲကွာ။ မင်းတို့စောက်ပေါက်တွေကို မင်းတို့ပထွေး သန်းရွှေ လဥ(-ီးအု) နဲ့ ဆို့ထားလိုက်။
January 6, 2011	Anonymous	#
ဒါပဲလား.. hacker တွေကဒီလောက်ပဲလား.. လုပ်ပါဦး yatanarpon web portal ကိုလည်းလုပ်နိုင်ရင်.. အဲဒါကမှနည်းပညာမြင်.မြင့်နဲနဲ့ကာကွယ်လုပ်ထားတာ. ခောတ်လူငယ်ကသာမာန်လုပ်ထားတဲ့ site လေးပဲ..ဘယ်လောက်ကြာကြာ hack ထား နိုင်မလဲကြည့်ရသေးတာပေါ့.. အတိုက်ခံ web site တွေ အစိုးရကိုထောက်ခံတဲ့ web site တွေ hack ခံရတော့ ကျေနပ်ပြီး ပျော်ပျော်ရွင်ရွင်သတင်းတွေတင်ပေးကြ. ကိုယိ့ site လည်း hack ခံရရော ဘာတွေအော်မှန်းမသိဘူး. မယင်ငယ် တုံးကြာညှပ်တဲ့အသံနဲ့ ဘာအဖွဲ့စည်းကိုတိုင်မယ်ညာအဖွဲစည်းကိုတိုင်မယ်.. ဘာလဲလာသေးတာ သတင်းမှန်းတွေတင်ပြနေတော့ အစိုးရကဒီလိုပဲလုပ်တာတဲ့. ဟား ဟား
ဆင်ငပဲ (ဆင်ေ×ွး) ကနေ ဘာလို့ ဂျိုကား (နွား) ဖြစ်သွာရတာလည်း။ နံမည် ပြောင်းစရာမလိုပါဘူး။ မကြောက်ပါနဲ့၊ မင်းပထွေးတွေလို ဘယ်သူမှ သေနတ် ခါးကြားထိုးမထားပါဘူး။
January 5, 2011	ဘာလာလာပွကြီး	#
January 5, 2011	joker	#
January 5, 2011	Anonymous	#
January 5, 2011	Comments are closed.
Total Visitors:Since 16 December 2008	10,726,293 hits